Nhungamiro yakakwana yekutamira ku Dubai City, Expat inobatsira muUAE 🥇
Nhungamiro yakakwana yekutamira ku Dubai ⭐⭐⭐⭐⭐
Yakabudiswa na Dubai City Company at October 30, 2017
Nhungamiro yakakwana yekutamira ku Dubai
Chinongedzo chakazara chekutamira ku Dubai. Kunyanya kugadzirwa yeZvamwe vekutsvaga basa. Chii chaungaita iwe tarisira ku Dubai. Pane zvinhu zvidiki zvakawandisa zvaunogona kuita usati watama kuenda kuUnited Arab Emirates. Guta roga roga rine guta rine zvaro positives uye zvikanganiso. Kunyanya kana iri pamusoro peMiddle East. Somuenzaniso, unofanira kuverenga a tsanangudzo yakajeka pamusoro pekuwana basa mu Dubai. Kune rumwe rutivi, iva nechokwadi chokuti une mari yakakwana uye ushingi kutanga hupenyu hutsva muMiddle East.
Isu tinopa gwara rakakwana re achienda ku Dubai. Kufamba kune imwe nyika itsva iri basa rinofadza uye rinotyisa. Panguva imwe chete sezhinji expats vatora danho iri kuti vawane basa pasina ruzivo rwakakodzera kana ruzivo rwekuti zvinhu zvinowanikwa sei munzvimbo. Ndizvo nzvimbo yakanakisisa yevashanyi kubva pasi rose.
Zvakakodzera kutaura kuti pane 80% ye Dubai's vagari vari anotsanangura upenyu nekushanda muguta. Izvo zvakauya kuguta pasina ruzivo rwakakodzera pamusoro pezvinodiwa kuti zviitwe. Pamusoro pe70% ye mabasa muHunters hunters vanoshandisa WhatsApp. Ndicho chikonzero nei zvakarongeka zvisati zvarongwa kugadzirira kuenda ku Dubai. Kuziva zvose zvinodiwa uye zvinodiwa ruzivo pamusoro pekuti zvinhu zvinoitwa sei uye nzira dzakanakisisa dzokuzviita. Pano tinokupai ne complete guide nokuti achienda ku Dubai.
Mari Yekugara muDhailand
Nhungamiro yakakwana yekutamira ku Dubai ndeye iwe?
Kunyange zvazvo Dubai inopa nzvimbo isina mutero asi mari ye kugara muguta anogona kuwana zvishoma zvishoma. Nokudaro, kana uri kutsvaga mabasa mu Dubai kutanga a basa rekuita ipapo, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chokuti mubhadharo wako uchatora zvinhu zvako zvekugara zvekugara. Dubai Area inozivikanwa seguta rinodhura zvikuru kurarama muUnited Emirates.
The cost of anogara mu Dubai mune izvi zviviri. Gara uchisanganisira dzimba pamwe nezvitoro zvine zvekudyira kunze kweguta. Kuve neimwe inonakidza kuwana varaidzo uye kunyoresa yako vana muzvikoro. Uyezve zvinoshandiswa, zvekufambisa neinishuwarenzi yemotokari. Ose anouya mune imwe kana iwe ichienda ku Dubai semuIndia expat.
Iwe unofanirwa kuziva kuti gore rinodhura mari yekubhadhara yeimba ye studio inosvika ku62,000 AED. Unofanira kutarisa yako nzira yekuwana chivako studio yeimba, kunyanya mu Dubai. Kuti uwane mamwe ruzivo pamusoro pemari yekubhadhara muEmirates. Zvinhu zvose zvinofungwa, zvinofanira kuitwa paunenge uchifamba nemhuri. When inotsvaga kuenda ku Dubai Vanofanira kuziva kuti zvimwe zvikwereti zvisingakwanisi kudzivirirwa pavanogara muDhailand. Zvakadai sekutenga kana kukodha motokari, kutenga zvinhu zvemagetsi, kutora zvikoro zvakanakisisa yevana vako. Kunyangwe zvikoro zvakanakisisa zvinovhura itsva Dubai campus gore rakatevera.
Mari yekugara mu Dubai, Muchawana apo iwe unosvika ikoko semuAfan expat. Kazhinji kutaura, ndizvo zvakadhura chaizvo kugara muDhaibha. Sezvakaitika, kusvikira 2020 expo iyo mitengo ichakwira kumusoro kwedenga. Nemhaka yezvivako zvitsva zvinouya ku Dubai. Uyezve vakatsvaga kutsvaga basa muUnited Emirates. Usati waenda funga tsanangudzo yakazara uye zvigadzirwa zvepamusoro nemari ye anogara mu Dubai.
Banking muDaily City
Kuvhura kambani yebhangi muDhaibha kana Abu Dhabi inotenderera kwaunotamira kune nyore nyore. Muchiitiko ichocho, zvimwe zvinodikanwa zvinofanirwa kunge zviri mukati nzvimbo, zvese zvazvinazvo zvinoenderana nebhengi. Kuti uvhure akaundi yakajairika yeakaundi, unofanira kuva mugari we Dubai. Asi munguva yakareba, mamwe mabhanga anobvumira inotsanangura vagari kuvhura maakaundi ekuchengetedza. Asi mune iyoyo bhangi meneja kumisikidza zvishoma muganho muganho unofanirwa kuitwa. Iwe unozofanira kupa zvinyorwa zvinodikanwa senge Pasipoti ine chivako chekugara, pakutanga uyewo kopi. Uye mune dzimwe nguva tsamba kubva kumushandi wako. Nezveiyo, hapana chikonzero kubva kuhurumende yeUnited Emirates.
Carer mu Banking sector mu Dubai. Kune rumwe rutivi, kuwedzera zvakaoma. Inenge dzose career search akanzwa nezve a zvemari mari mu Dubai. Kunyanya, nezvemari masangano ari kukura zvakanyanya. Asi kwete vashandi vose vanoita izvi nenzira yeupenyu. Semuenzaniso zvimwe zvekambani dzemakambani akadai Dubai bank cuts of jobs mu Mubatanidzwa Arabhu Emeretsi. Mumamiriro ezvinhu akadaro, iwe unofanira kuziva kuti kuwana basa mu Dubai zvikwata zvemari zvinowedzera zvakaoma zuva rimwe nerimwe.
Semuenzaniso kuti apfuure mubvunzurudzo mubhadhari webhangi. Iwe uchada inopa chikwata che MBA kuti uwane basa ku Dubai. Nezvakanaka, iwe unogona nguva dzose kutanga basa pane dzimwe nzvimbo dzepamusoro. Semuenzaniso sevatengesi vekutengesa kana cashier. Pamusoro pezvakaipa, kana iwe uine ruzivo rwakakwana mubhengi.
Vatsva vanotsvaka basa havazobhadharwi nekukurumidza sezvavanofunga. Kunyanya chero ipi zvayo kutevera mahofisi emabasa. Thomson Reuters uye Job Pro iri kuunganidza vashandi vane ruzivo to gadza yakozve.
Mutauro muUnited States Emirates
Inotsvaga kubva kune 85% yehuwandu hweDhailand uko iwe unogona kuwana vatorwa vanotaura Philippines. Zvimwewo Hindi neUrdu neBangali. Uyezve chiTamil, Tagalog, Persian, Chinese, Malayalam, kuwedzera kune mimwe mitauro yakawanda. Uye kunyangwe chiArabhu chiri mutauro wepamutemo we Brazil, Chirungu ndiwo mutauro unonyanya kutaurwa muDubai. Saka, mabasa ari muDubai inogona kuitwa se call call center muUAE.
Kune 4 marudzi eArabic anotaurwa muDhailand. Uye ivo Maghrebi Arabic, Egyptian Arabic, Gulf Arabic uye Levantine Arabic. Zvisinei, mutauro unonyanyozivikanwa unotaurwa kuDhawai ndiArabic neChirungu. Zvichipiwa pfungwa idzi, zvinonzwisiswa nevose veArabic speakers pane Modern Standard Arabic. Yakazara chinotungamira kuenda ku Dubai ndewe iwe?.
Pasinei nokuti iwe unofarira kutaura muchiArabic kana Chirungu, zvakachengeteka kutaura iyo inotsanangura mararamiro uye ikozvino kushanda in the Emirates. Kana kunyange kushanyira Dubai uye kuronga kuti stay nokuti iwe uri kutsvaga Dubai Jobs. Kune rumwe rutivi, kana uri kutaura Chirungu. haazovi nematambudziko ekukurukurirana nevanogara kana mumwe nomumwe.
MuUnited Arab Emirates, kunewo makuru bhizimisi maitiro aunoda kuti vatevere semhepo yekufambira. Sezvazviri, iwe unoda kudzidza bhizimusi English. Kunyanya kana uri kutarisa kuti utange kushanda pahutano hwehutungamiri. Nenzira, haisi i Dubai kana Abu Dhabi chete. Iwe unofanirwa kuva nechiitiko chakakura kana uchida kushanda kune imwe nyika muDhaibha kunyanya mubhizinesi.
Mamiriro emamiriro ekunze mu Dubai
Usati wasvika kuDhailand, expats vanofanira kuziva kuti guta iri kupisa. Nguva yose iyo mwedzi waAgasti ndiyo inopisa mwedzi mu Dubai ane chiyero chekupisa kwe 36 ° C (96 ° F). Apo mwedzi waJanuary unozivikanwa semwedzi unotonhora wegore nekupisa kunosvika 19 ° C (66 ° F). Inowedzera zvakaoma kunakidzwa nokufamba mupaki kana kugara mune kapu yekofi. Kuti uise imwe nzira, kunze kwechivako ndiyo inotyisa inotyisa. Izvozvo zvinoita kuti zvive zvakaoma kuti vagari vati vafare kunze kwekunze. Air-conditioner is everywhere and this is why isu tinokurudzira professionally zvese zvinotsvaga uye vagari vemo kuva nejaka pavari nokuti inotonhora inopisa mukati mega.
Mamiriro ezvinhu emamiriro okunze zvikurukuru muDhaibha neAud Dhabi. Kazhinji, ndeyegore rose zororo. Munhu wese akamboshanyira UAE anoziva Dubai inzvimbo inoshamisa yekugara. Mamiriro okunze anongonakidza nekushambira uye kutenga. Chimwe chinhu chinoshamisa chaunogona kuwana mumusoro weUnited Emirates. Nzvimbo ye Skydiving muBud Dhabi kana Mapurisa anoshamisa motokari dzemotokari ku Dubai. Zvinongoshamisa kune munhu wose anoda kuda. Isu tino yakakurudzirwa kune vatsva vashanyi kuti vaedze. Kunyanya kwenguva yezhizha, Emirates ihotera risingaperi-risingagumi pasi pemazuva ekudenga.
Uye Ungave uri kushanyira Dubai kumabhizimisi kana kufara, munhu wese anongoda kuti ave nerudo rwezvinonzi "Dubai Zvakaitika". Kuwana zviri sei ku Dubai tarisa uye joina WhatsApp Mabasa eboka.
Doro inoshandiswa muEmirates
Vakawanda vane pfungwa yokuti Doro rinoparadzirwa pachena emirate of Dubai. Asi chokwadi ndechokuti, kunwa doro muhurumende hakubvumirwi nemutemo nekurangwa kunogona kusvika kujeri. Kupihwa idzi nhoro doro muEmirate yeDhaibhi inongobvumirwa chete muhotera, mabhairi uye dzimwe nzvimbo dzekudyara uye resorts chete.
Dubai City ndeye, chokwadi, chinamato cheMuslim, saka doro haribvumidzwe zvakawandisa. Kunyangwe uchiri kutsvaga basa muEmirates. Iwe unogona kungozvikurudzira iwe sevamwe vevanotsvaka basa kune dzimwe nyika. Ingoenda kunharaunda uye unotora kunwa. Pane nezvimwe zvakawanda zvinorambidzwa muUnited Emirates Emirates kuti iwe unofanirwa kuziva nezvekuti utange. Asi kune rimwe divi, unogona google it. Uye kana iwe ukapinda mudambudziko unogona kugara uchitaurirana Mapurisa. Parutivi rwakanaka, runofanira kunge rwese zvakanaka kana iwe uchingofamba uye uchishanyira Dubai chete.
Nhungamiro yakakwana yekutamira ku Dubai ndeye iwe ?. Iwe une chokwadi chekusashandisa doro here? Wagadzirira ku Dubai here?.
Local Transport and Dubai City
Kakawanda, metro ye Dubai inowanzozara nevatengi munguva yekukwira inobva ku7 kusvika ku10 am uye 4.30pm kusvika 8 masikati kana kuti gare gare. Paunenge uchienda nekatekisi, nguva yakanakisisa kuenda chero kupi zvako nekutsanya kuri usiku apo migwagwa isati yakabatikana. Zvisinei, iwe unofanira kuziva kuti kana uchifamba nemotokari, bhazi kana tekisi; nguva iyo migwagwa inowanzovharwa ndeyeChishanu masikati uye musi weMugovera kunyanya kunotengesa mabhizimusi, nzvimbo dzekushanyirwa, uye kugungwa uye misika yemari. Uyewo kana iwe uri kutarisa kuti uve mukadzi wemudzimai ku Dubai. Iwe unoda kuziva mimwe mitemo inogona kushanda kwauri.
Chimwe chirevo che nharaunda dzekutengesa ku Dubai ndiyo Tram yakatangwa mu2014. Sezvimwe chikamu cheDhaibha chemazuva ano chinoshandiswa chekutakura kwevanhu. Dubai's Tram inopa vatasvi nyore kuwana zvose zvinokosha munzvimbo iyi. Zvakadai se Jumeirah Beach Residence, Dubai Marina, iyo bhizinesi nzvimbo uye Al Sufouh mumugwagwa. Zvakakodzera kutaurira zvakare kuti Dubai Tram inobatanidzawo nechiteshi chemashizha. Pamusoro pezvakanaka, unogona kutaura nedzimwe nyika dzakasiyana-siyana. Izvo chaizvo zviri kushanyirawo UAE. Semuenzaniso, kunze kuvaIndia, pane zvakawanda Vanhu veSouth Africa muDhaibha. Iwe unogona nyore kutaura nemunhu wese muUnited Emirates muChirungu.
Ikoko kune yeFair Ferry pamwe chete iyo inofamba nezvekutashanya. Zvinoreva izvo zvinobvumira vashanyi vanoona guta racho kubva kugungwa uye nemamerize mumakona ayo akanaka uye zvigadziriswa zvivako. Pane zvakawanda marketing job in Dubai yakaitwa nehurumende yeUAE. Zvechokwadi kusimudzira guta rino rinoshamisa. Nokuda kwekuunza mamwe mavakashanyi kuAud Dhabi ne Dubai.
Nzira yekuwana sei basa mu Dubai semunhu wokune imwe nyika?
Kukanganwa kubhadharwa muDha Dubai sekutsvaga kutsva. Zvechokwadi, vatsva vanotsvaka basa zvinoda kushanda zvakaoma zuva nezuva. Kungoenderera mberi kugamuchira chipo chekushandira. Pamusoro pezvakanaka, kune vakawanda vakashandira misangano yaunogona kushandisa kuti uwane mabasa Dubai. Zvirokwazvo haisi chingwa chakareruka tsvaga basa muDubai. Kune vanhu vazhinji mukati meAUE. Ndiani angade kuwana mikana mikuru yebasa ne Dubai City Companies? Nokuda kwechikonzero ichi Basa rekune dzimwe nyika ku Dubai yakakurumbira.
Imwe nzira yakakurumbira yekuwana basa muUAE. Ndiko kuenda kuguta, uye kutsvaga kufamba-in interview mu Dubai. Vashandi vedu vanokurudzira zvikuru chiso chekutarisana nekutaura vashandi vashandi. Nokuti kana iwe uchikwanisa kuzvitengesa kune vatariri vemari. Muzviitiko zvakawanda, iwe ichakunda kushandura kurwisana.
WhatsApp Groups ku Dubai
WhatsApp Boka Rekuberekera riri kukura zvakanyanya nekukurumidza zuva rega rega. Mabasa mu Dubai semugumisiro wokukura nharembozha kudzorera kubatsira pamusoro pe50,000 vanotsvaga basa muAAE. Boka redu rakaumba a job search mapoka muDubai. Nepfungwa dzekubatsira vanotsvaka basa vari kutarisa kuti vatange kushanda kune dzimwe nyika kuDhaibha. Kunyanya kana vakatarisa kuva akaiswa nokukurumidza muUnited Emirates. Saka sezvo iwe wakaverenga gwaro redu reDubai. Iwe unofanirwa ikozvino kuedza kuwana dream job. Dubai Guta ndiyo imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekugara. Saka sei usingayedze uye kutumira kunyorera basa. Dubai City Company timu yekubika. Is nguva dzose achibatsira expats kuti iiswe. Kune rimwe divi, iwe unofanirawo kutarisa makambani ekubhadhara. Careerjet uye Monster Gulf. Zvechokwadi zvakakosha kushandisa neCV yako.
Nzira yakakwana yekutamira ku Dubai ndeyekuti chii chaNesApp ?.
WhatsApp ndeyekushandira muUAE
Uyu mutungamiri wakakwana wekutamira ku Dubai iwe !.
MuUnited Emirates. Unogona tsvaka mapoka emabasa zvakare muEurope muPoland. Special forums kune vatsva vanoenda kune dzimwe nyika muUAE. Kunyange iwe unogona kuwana mapoka mashoma emapoka. Kwamungawana mazano pamusoro pemabasa ekubhadhara mumukuru weUnited Emirates. Nezvakanaka, imwe yenzira dzakanaka ndeye kushandiswa kwefoni yevashandi kune vanotsvaka basa mu Dubai.
Nhungamiro yakazara yekuwana kambani yakanaka yokubhadhara ku Dubai. Iyi inzira kana uchida kutsvaga basa rekutanga muAFA. WhatsApp mapoka ndeimwe yakanakira kuwana basa muUAE. Asi iwe unogona kutarisa kwedu Upload Resume kusvika kunekukurumidza kukura Guta Panyika chikamu. Izvi ndezvechokwadi zvakakwana mutungamiri wekutamira ku Dubai.
Nzira yekuwana sei vashandi vakanakisisa muEmirates
Kunewo zvakare nzira shomanana dzekuwana basa muUAE. Asi pamwe MaIndia muDhailand. Kune mamwezve marudzi ari kutsvaga basa kuEmirates. Semuyenzaniso, Pakistani avo vari kutsvaga mabasa mu Dubai. Vakakwanisa kuwana basa kuburikidza nekushandisa mabasa edu muUAE. Kuwana vashandi muUnited Emirates. Iva rakaoma basa kunyanya pamberi expo 2020.
Tende redu kunyanya kushanda nezvitsva zvitsva. Pamusana pemishandisirwo eEexpo 2020, unofanira kuita zvakasimba kuti uwane basa.
Dubai City Company ine mabasa aripo ku Dubai uye Abu Dhabi kwaunogona kutumira CV. Iva nechokwadi chokuti uchatumira zvinyorwa zvatsvaga kune kambani yedu. Uyezve, Dubai inova yepamutemo inoshanyira nzvimbo dzose kuMiddle East.
Zvakanaka, sezvatiri kupa zvakanaka guides Mabasa muDubai. Boka redu rakafunga kuwedzera ruzivo rwemutauro wega wega wedu Dubai expats. Saka, mune izvi mupfungwa, iwe zvino unogona kutanga kutarisa mazano, mazano uye basa muUnited Emirates nemutauro wako.